Education Electricity - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > ọkụ eletrik > ọkụ eletrik
Na BSO nkuzi eletriki oge nile mụta iji wụnye nrụnye eletrik ọhụrụ n'ụlọ. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike ịmezi ma kwadobe nrụnye dị ugbu a. Ị ga-amụtakwa ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ eletriki eletrik na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ eletrik. Nke a na ya na ụwa. Ọ bụ otu ọzụzụ bara uru na ihe ole na ole n'ozuzu.
Na 2e BSO Egwuregwu eletrik mụta na jiri ihe na ngwaọrụ ndị elekriki na-eji. N'ọmụmụ ihe anyị, ị na-amụta otú ị ga-esi tinye usoro dị iche iche n'ọrụ mgbe ị na-aṅa ntị na nchekwa, ahụike na gburugburu ebe obibi. Ná ngwụsị akara ogo 2e, ị nwere ike iwunye nrụnye eletriki na ebe obibi ọhụrụ ma ọ bụ megharia nrụnye dị ugbu a. Ị na-amụta akara ndị kasị mkpa eji mee ihe na eserese eletriki ma jiri ya. Ị na-amụta ịchọta maka njehie na eserese eletriki. Ị mụtara ịdọrọ waya, wụnye eriri, dozie mmezi eletrik na jikọọ ngwaọrụ. Na mgbakwunye na nrụnye eletrik ndị a dị mfe, a tọrọ ntọala maka ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ eletriki na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ eletrik.
Na 3e BSO Egwuregwu eletrik mụta iji wụnye nrụnye eletriki ọhụrụ na ụlọ ma ọ bụ ụlọ na iji nọgide na-arụkwa ma rụkwaa nrụnye dị ugbu a. Ị na-amụta iji aka gị rụọ ọrụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. N'ọmụmụ ihe anyị, ị na-amụta ịme ihe ndị na-atụ aro, ebe nrụnye ọkụ, ihe ọkụkụ, ọkụ eletrik, akpaaka ụlọ ... na obere mmezi. Ị mụta banyere ụdị ígwè eletriki niile, njikwa kọmputa na nchịkwa ịchịkwa, nrụnye nnukwu ọkụ na usoro ntụgharị dị ka eji eme ihe na ụlọ ọrụ. Ị mụtara ịsụgharị atụmatụ n'ime ihe omume PLC ma rụọkwa njikwa dị mfe n'enweghị ihe ọ bụla. Ị mụta otú ị ga-esi gbakọọ ego ma chebaa nchekwa, gburugburu ebe obibi na ike.
N'oge gị etinye ọkụ eletrik TSO ị nweta ohere zuru oke nke ihe ị maara ma nwee ike itinye n'ọrụ. Ị na-atọ ụtọ ezigbo ọrụ dị ka elecricien.
Ị nwere mmasị na Dual Learning? Gbalịa hụ na ọzụzụ anyị Ngwunye ụlọ eletriki abụọ - Electricity Dual!
Ị nwere mmasị na nrụnye eletriki na igwe? Ị dị mma na nke ziri ezi? Ị na-achọ iji aka gị rụọ ọrụ, kamakwa kọmputa? Ekem ntụziaka a Ike ụgbọ elu TSO ma eleghị anya ihe maka gị.
Ị nwere ike ịmalite mgbe ọ bụla na TSO-Electricity N'ezie, ọ bụ ezie na ịmara ihe gbasara ihe na ngwaọrụ bụ n'ezie. Ị nwere ọgụgụ isi n'ozuzu ya, ma echefula na echọrọ ụfọdụ mgbakọ na mwepụ maka usoro a.
Nhazi kachasị mma bụ 1 ogo ụlọ ọrụ
Mgbe nhazi 3e ọkụ eletrik ị nweta ya akwụkwọ nke Secondary Education. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. N'ụlọ akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịmepụta ihe n'ọmụmụ nkuzi Electricity Egwuregwu Egwuregwu Emeputa of Egwuregwu Egwuregwu Industrial. Mgbe ọ na-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị Ị bụ onye ọkụ ọkụ eletrik na ị nwere ike ịmalite ọrụ n'ebe ọrụ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị. Enwere ike ịchọta ọtụtụ ọrụ n'ime mpaghara. Ya mere ị nwere ike ịmalite ngwa ngwa!
Afọ 6e nke na-erughị ala (37KB, .pdf)